TOP News: Wasiir Kuxigeenka Bartoolka Soomaaliya oo la kulmay Xoghayaha Arimaha Dibadda ee Mareykanka. – Kismaayo24 News Agency
by admin 10th July 2017 0102
Magaalada Istanbuul ee Dalka Turkiga waxaa kulan Muhiim ah ku yeeshay Xoghayaha Arimaha Dibadda ee Mareykanka, Red Telerson iyo Wasiir Kuxigeenka Macdanta iyo Batroolka ee Soomaaliya Mudane Maxamuud Cabdiqadir “Hilaal” kuwaas oo ka wada hadlay arimaha la xiriira soosaarista Shidaalka ee Soomaaliya.
Telerson iyo Hilaal ayaa isla jeexjeexay, suurtagalnimada sidii soomaaliya loosoo saari lahaa kheyraadka dabiiciga ah ee uu alle ku maneystay, iyagoo dhinacyada isku waafaqay wixii hadda ka dambeeya in Soomaaliya ay si rasmi ah uga faa’iideysato Kheyraadkeed Dabiiciga ah ee u keydsan.
Wasiir Hilaal ayaa dhinaca kale wadamada horumaray ee uu mareykanka Hormuudka u yahay ka codsaday, sidii soomaaliya looga gacan siin lahaa soo saarashad Kheyraadka dabiiciga ah sid Shidaalka iyo Macdanta la aaminsnayahay in ay gobollo badan oo dalka ah kujiraan.
Kulanka dhex maray Wasiir Hilaal iyo Xoghaye Telerson ayaa gaba-gabadii la isku waafaqay in Soomaaliya laga caawiyo hanaanka ay kula soo bixi karto kheyraadka dabiiciga ah, iyo in loo helo suuq loo iibgeeyo wixii lasoo saaro arintaas oo uu si weyn u soo dhaweeyey Xoghaye Telerson.
Wasiir kuxigeenka Macdanta iyo Batrolka ee Soomaaliya oo kamid ahaa Golihii Wasiirada ee uu dhawaan Magacaabay RW Kheyre ayaa dardar cusub galiyay wasaarada inta u jogayna waxa u ka qayb galay shirar kala duwan oo ka dhacay Dalal, Kenya, Norway iyo Turkiga waxa sidoo kale u qorshaysan Wasiirka Shir muhim ah oo ka dhici dona Wadanka UK Bisha Fooda inagu soo haysa.
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo la wareegay shir guddoonka shirka Golaha Amniga Qaranka
Breaking News :- Dowlada Itobiya oo Axmed Madoobe ku amartay in u wadankeeda ka baxo.
Madaxweyne Xasan Sheikh oo shaaciyay in usan maalin ku darsan doonin xiliga xukunkisa u ku egyahay